जापान जाँदै हुनुन्छ? यस्ता कुरा नलैजानुस्, एयरपोर्टबाटै फर्काइदिन सक्छ - Global Sansar
कोरोना भाइरसबाट अमेरिकामा एक नेपालीको ज्यान गयो
‘लकडाउन’ उल्लङ्घन गरी सडकमा निस्कने १० जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो
चिनियाँ राजदूतले भन्छिन्ः ‘हामी नेपालका लागि प्रार्थना गर्दैछौं, हामी साथमा छौँ’
भोली मङ्गवारदेखि एक हप्ताका लागि ‘लकडाउन’, घर बाहिर निस्कन नपाइने
कोरोना भाइसबाट बच्न हात जोड्दै राजेश हमालको यस्तो आग्रह (भिडियो सन्देश)
जमुनाहा नाकामा अलपत्र परेका ८०० नेपालीको उद्धार, एक दर्जनमा उच्च ज्वरो
ब्रेकिङ: फ्रान्सबाट कतार हुँदै नेपाल आएकी एकजना किशोरीमा देखियो कोरोना, सरकारद्वारा पुष्टि
कोरोनाको संक्रमणबाट अहिले सम्म १४,६०० भन्दा बढीको मृ’त्यु
अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरस फैलिएसँगै अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द
फेसबुकको मेसेन्जरमा अडियो पठाइ कोरोनाको भ्रम फैलाउने वि’रुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने
Home/आर्थिक समाचार/जापान जाँदै हुनुन्छ? यस्ता कुरा नलैजानुस्, एयरपोर्टबाटै फर्काइदिन सक्छ
जापान जाँदै हुनुन्छ? यस्ता कुरा नलैजानुस्, एयरपोर्टबाटै फर्काइदिन सक्छ
२०७६, १४ माघ मंगलवार १०:५४
माघ १०, काठमाडौं । जापानले विदेशी नागरिक प्रवेशमा कडाई नगरेपनि उनीहरुले साथमा ल्याउने सामग्रीमा भने कडाई गरेको छ । जापान भिजिट भिसा, स्टुडेन्ट भिसा, विजनेश भिसामा सजिलै जान सकिन्छ । विद्यार्थीले जापनिज भाषा अध्ययनका लागि जापान जान सक्छन् । भिजिट भिसाअन्र्तगत घुमफिर र आफन्त भेटघाट गर्न जान सकिन्छ भने, विजनेश भिसा भएकाले आफ्नो ब्यवसायीक कामका लागि जापान जान सक्छन् । कतिपयले वर्किङ भिसामा जाने गरेपनि यो एकदमै नगन्य हुन्छ । यद्यपि, पछिल्लो समय जापानले नेपालबाट कामदार लैजाने गृहकार्य गरीरहेको छ ।
नेपालबाट वर्षेनी हज्जारौं विद्यार्थी जापनीज भाषा अध्ययनकालागि जाने गरेको शुभाङ्गी एजुकेशनल कन्सल्टेन्सीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर किशोर तिवारी बताउँछन् । लामो समयदेखि जापानका लागि काम गर्दै आएका किशोर तिवारीको विचारमा उच्च शिक्षाकालागि जापान गएर करियर सुरक्षित गर्नु विद्यार्थी अभिभावक दुवैका लागि सहि निर्णय हो । ‘जापान गएर उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि शुरुमा जापनिज भाषा सिक्नकै लागि जानुपर्छ । तथापि, भाषा सिकेर विश्वविद्यालय ज्वाईन गरेपछि जापानमा विभिन्न अवसर पाइने भएकाले नेपाली विद्यार्थीको रोजाईमा जापान पर्छ ।’
इन्फरमेशन टेक्नोलोजीमा जापान विश्वकै उत्कृष्ट देश हो । नेपालमा सिटिइभिटीका कोर्षलाई त्यत्ति रुचाइदैन अर्थात, सीप मुलक शिक्षालाई दोस्रो शिक्षाका रुपमा हेरिन्छ । तर, जापानमा भने सीपयुक्त शिक्षालाई सम्मानजनक रुपमा हेरिन्छ । जापानमा साना ठूला अनगिन्ती सीपमुलक शिक्षा दिने कलेज तथा विश्वविद्यालय छन् ।
जापनीज भाषा अध्ययन गरेको विद्यार्थीलाई जापानमा काम पाउन पनि सहज नै छ । कतिपयले भाषा बुझिँदैन, कानुन कडा छ । विदेशी भनेपनि जापनीजले राम्रो ब्यवहार गर्दैनन् भनेर भन्छन् । तर, डेढ दशक देखि नेपालबाट जापान गएर अध्ययन गरेकाहरुको अनुभवमा त्यस्तो गुनासो छैन ।
‘जापनीजहरु सारै मेहनती हुन्छन् । अल्छी मान्छेलाई चैं मनपराउँदैनन् । बृद्धबृद्धाहरुले पनि काम गरिरहेका हुन्छन् । जापानमा कुनै समस्या छैन ।’ प्रायः शैक्षिक कामका लागि जापान गइरहने तिवारीले भने । नेपालमा एसएलसी, कक्षा १२ उत्तिर्ण गरी डिप्लोमा, ब्यालर्स, मास्टर्स गर्न जापान जान चाहने विद्यार्थीले अनिवार्य भाषा कक्षा लिनुपर्छ । नेपालमा वेसिक जापनीज भाषा जानेका विद्यार्थी अर्न्तवार्ताका लागि योग्य हुन्छन् । जापानमा अन्य भाषालाई त्यत्ति प्राथमिकता दिईदैन । त्यसकारण अङग्रेजीमा मास्टर्स नै गरेकाले पनि जापनीज भाषा सिक्नु अनिवार्य छ ।
सुभाङ्गी एजुकेशनल कन्सल्टेन्सीले यहि कुरालाई दृष्टिगत गर्दै अनुभवी भाषा प्रशिक्षक राखेको छ । जापानका लागि काम गर्ने अन्य शैक्षिक संस्थाले एन ५, एन ४ सम्म गरेकालाई भाषा प्रशिक्षक राखेकोमा सुभाङ्गीले जापानमै लामो समय बसोबास गरी जापनीज भाषामै एन २ पास गरेका प्रशिक्षकको ब्यवस्था गरेको छ । ‘भाषा प्रशिक्षण दिनु गाह्रो काम हो, आज हामीले पढाएका विद्यार्थी भोली जापानमा गएर जापनीज भाषा बोल्नै बुझ्नै सकेनन् भने समस्या हुन्छ । त्यहि भएर हामीले अनुभवी भाषा प्रशिक्षकको ब्यवस्था गरेका छौं ।’ म्यानेजिङ डाइरेक्टर तिवारीको भनाई छ ।
पछिल्लो समय जापानले नेपालबाट जापानमा ल्याइने खाद्यपदार्थमा कडाइ गरेको छ । खासगरी मासु, मासुजन्य वस्तुहरु ल्याउन जापान सरकारले कडाइ गरेको छ । यसै सन्दर्भमा दुई जना युवाको भिसा नै रद्द गरिदिएको छ । जापानमा प्रतिबन्धित वस्तु वा खाद्यपदार्थ ओसार पसार गरे ३ वर्ष कैद १० लाख सम्म जरीवाना हुने कानुन छ ।यस कुरामा विशेष ध्यान दिउँ
मासु र मासु जन्य खानेकुरा नेपालबाट विशेष ल्याईने सुकुटी, फ्राई मासु आदि
ससेज, सलामी, जनावरको मासुबाट बनेका कुनैपनि खानेकुरा
पकाएको खानेकुरा नेपालमा नै घरमा तयार पारेर पकाईएको तरकारी, मिठाईका परिकार आदि
मिठाई खुल्ला भाँडामा राखेर गुणस्तर, बनाएको र खान मिल्ने अन्तिम मिति उल्लेख नभएको तथा मिठाईमा प्रयोग गरिएका पदार्थ उल्लेख नगरिएको
सुख्खा खानेकुरा सिन्की, गुन्द्रुक, खुर्सानी, अन्य सुकाएका खानेकुरा, गाँजा, भाँगं (अचारमा प्रयोग गर्न भन्दै ल्याएको पाईन्छ)
खुर्सानीको धुलो, खानामा प्रयोग गरिने मसाला जन्य सामग्री खुल्ला तथा मिति, गुणस्तर, प्रयोग सामग्री नखुलाईएको
घ्यु, गुदपाक, सुत्केरी मसला लगायत खुल्ला घरेलु खानेकुरा जसमा बनेको मिति, प्रयोग गर्न मिल्ने मिति प्रयोग गरिएको सामग्रीहरुको नाम स्पष्ट खुलाएको छैन भने
प्रज्वलनशिल पदार्थ (आगलागी हुनसक्ने ग्याँस, तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, ईनामेल, लाईटर, सलाई, विद्युत् प्रवाह गर्नसक्ने चार्ज व्याट्री लगायत
हतियार तथा औजार (चक्कु, खुकुरी, कैंची, पत्ती ब्लेड, हम्मर, मार्रतोल, लगायत काट्न मिल्ने खालका हतियारजन्य सामान यद्यपी यि मध्ये केही वस्तु ह्याण्ड क्यारीमा नमिलेपनि लगेजमा राखेर ल्याउन मिल्छन् । तर त्यसको लागि अनिवार्य आधिकारीक बिल र कतिपय अवस्थामा प्रयोगको उपादेयता पुष्टि गर्न सक्नु पर्दछ ।
बन्दुक, गोली, बारुद्ध, पटाका लगायत विस्फोटक जन्य सामग्री पूर्णत निषेध र दण्डनिय अपराध हुन्
औषधि व्यक्तिगत प्रयोग गर्दै आएका औषधि बाहेक बोक्न पाईंदैन १ आफुले प्रयोग गरिरहेको हो भने पनि अनिवार्य चिकित्सकले काटेको पुर्जी र चेकजाँच गरेको कागजात हुनुपर्नेछ ।
अरु व्यक्तिको लागि हो भनेपनि थोरै मात्रामा तर जापानमा ल्याउन पाईने त्यो पनि अनिवार्य चिकित्सकको चेकजाँच पत्र, औषधि पसलको पुर्जी साथमा हुनुपर्दछ । लपछिल्लो समय प्राणघाटक कोरोना भाईरसको संक्रमण मासुजन्य पदार्थका कारण फैलिएको कारणसमेत जापानको ईमिग्रेसले बिमानस्थलमा चेकजाँच कडा बनाएको छ ।
भारतमा तीर्थयात्रामा हिँडेका ३४ नेपाली चढेको बस दुर्घट’ना, ६ जनाको मृ’त्यु
२०७६, ८ फाल्गुन बिहीबार १०:३७
फैलिँदै कोरोना भाइरस: कोरिया, जापान, र थाइल्याण्डमा पनि भेटियो ।
२०७६, ७ माघ मंगलवार ०१:५१
२०७६, ११ चैत्र मंगलवार ०५:४५
२०७६, १० चैत्र सोमबार ०६:४९
२०७६, ११ चैत्र मंगलवार १४:०९